Otu esi enweta PR | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido mmekọrịta ọhaneze, jide n'aka na ị ga-enyocha ha niile Na-eduzi na PR Nke Brownstein & Egusa dere. Maka ụfọdụ nkọwa zuru ezu banyere atụmatụ PR, gbaa mbọ gụọ akwụkwọ ọbịa - Ndụmọdụ PR Site na onye gara aga VentureBeat Writer - site na Conrad Egusa na Scott Monty's kediegwu blog. Pụrụ iche ekele Marty Thompson maka ịchọta!
Ọ bụrụ na m ga-agbakwunye ihe ọ bụla, ọ ga-abụ nzọụkwụ dị n'etiti 3 na 4 mgbe ị n'ezie kọwaa gị pitch. Enwere m ọtụtụ ndị nnọchi anya PR na m na aha mbụ na… na otu onye bụ onye edemede na blọọgụ anyị ikikere ịkekọrịta ozi ọ bụla ọ chọrọ. Ihe kpatara ya bụ na onye edemede ahụ na-asọpụrụ ozi nke blog anyị ma ghara imebi ya. Inwe egwu dị egwu, ahaziri iche dị mkpa!
Tags: mbido ndu ka prbrownstein egusaeduzi prprn 'akukommekọrịta ọhaneze
Ọkt 31, 2013 na 12:57 AM
Ndewo Douglas, Achọrọ m ịsị ọtụtụ, ọtụtụ ekele maka ịkekọrịta akụ PR m mepụtara. Biko mee ka m mara mgbe ọ bụla ị chọrọ ihe ọ bụla.
Nye ndị na-agụ MarketingTechBlog, enwere m obi ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla gbasara post na ngalaba nkọwa ebe a.